Vehivavy Malagasy hivoaka any ivelany Tsy voarara saingy misy fepetra maro takiana kosa
Toliara Ho tapaka ny rano amina faritra maro
Ho tapaka ny rano amina faritra maro ao Toliara amin’ity anio ity, raha ny fanambaran’ny Jirama ao an-toerana omaly.
Ambatondrazaka Nifandona ny mpivarotra sy mpitandro filaminana
Niteraka fifandonana teo amin’ny mpivarotra sy ny mpitandro filaminana tao Ambatondrazaka omaly ny fampiharana ny Didim-pitondrana noraisin’ny Prefektiora hanakatonana ny tsena rehetra manomboka amin’ny 1ora. Tsy nisy aloha ny naratra na izany aza.
Filohan’ny HAFARI Miantso ny filohan’ny ANTM hifanaja fa tsy hifanaratsy
Miantso ny filohan’ny ANTM hifanaja fa tsy hifanaratsy ary samy hanao izay hampandeha ny asa sahaniny ny filohan’ny fikambanana Hafari Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina.
Vehivavy Malagasy miasa any Koweit Tapitra anio ny fe-potoana ...
Tapitra anio zoma 22 mey ny fe-potoana hahafahan’ireo vehivavy Malagasy miasa any Koweit mijanona any an-toerana.
Andohotapenaka I Trano 11 may, lasa lavenona ny vola 2 tapitrisa Ar
Nitrangana hain-trano tetsy Andohotapenaka I afak'omaly alarobia tokony ho tamin’ny 08 ora maraina.
Mpisoloky any Antsiranana Nalefa any am-ponja izy 3 mianaka
Lehilahy iray 33 taona misoloky ho mpiasan’ny fitsarana sady « inspecteur » eny anivon’ny fonja sy ny vady andefimandriny izay vao 40 taona monja nisoloky ho mpampivelona ary ny zanaka anadahin’’
Niteraka resabe teto amintsika ny faran’ny herinandro teo ny fisiana vaovao diso izay nilaza fa tsy azon’ny vehivavy irery hatao intsony ny mivoaka any ivelan’i Madagasikara raha tsy nahazoany alalana avy amin’ny vadiny.
Nitondra fanamarihana mikasika izany ny polisim-pirenena eo anivon’ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka ny faran’ny herinandro teo ka nambaran’izy ireo tamin’izany fa noho ny fitarainana maro voarain’izy ireo momba ny fampijaliana sy ny tsy fanajana ny zon’olombelona mahazo ireo tovovavy na vehivavy miondrana an-tsokosoko miasa any ivelany no nahatonga ny filoham-pirenena handray fepetra tamin’ny fampodiana ireo voakasika, indrindra fa ireo tratry ny asa fanandevozana tany amin’ny tany amin’ireo tany arabo volana vitsy lasa izay. Tsy midika anefa izany fa tsy mahazo mankany ivelany ny vehivavy manambady na tsia iray saingy ilana fanamariham-pandehanana kosa ( justificatifs de voyage, lettre d’engagement, certificat d’hébergement na reservation d’hôtel, attestation d’inscription ou de bourse d’étudiants ou professionnelle…). Ho an’ireo vehivavy na tovovavy manao andiany na maromaro kosa mikasa hivoaka any ivelany nefa tsy afaka manamarina mazava ny anton-diany ary tsy afaka manamarina ny ho enti-manany amin’izany dia izay hatao any ivelany izany dia hamafisina ny fitakiana ny fepetra hofenoin’izy ireo vao afaka mandeha izy ireo. Lohalaharana ireo mikasa ny handeha ho any Koweit, Arabie Saoudite, Liban ary Moyen Orient. Nomarihin’ity fanambarana avy amin’ny polisim-pirenena ity moa fa na dia ireo tovovavy sy vehivavy aza no tena lasibatra amin’ireo karazana asa fanandevozana maoderina mitranga any ivelany ankehitriny dia mihatra amin’ireo tovolahy na lehilahy handeha amina toerana mety mampiahiahy ihany koa ireo fepetra ireo.
Nilaza ny heviny ny filoha Rajoelina omaly momba ity raharaha ity : izay te hivoaka dia tsy hisy mihitsy famerana, fa izaho dia miaro ny vehivavy voazimbazimba any ivelany. Tsy misy hoe tsy mahazo mivoaka sy tsy mahazo makany. Handefa olona any Koweit satria 100 ny vehivavy lasibatra, ary 50 no efa migadra tsy afaka mivoaka tratry ny antsojay. Tsy zakako intsony herisetra. Raha samy hahantra ihany aleo mahantra eto an-toerana, toy izay hiharitra vono any. Tsy ekena ny famoronana vaovao tsy marina sy tsy mifandraika amin’izay tena izy, hoy hatrany I Andry Rajoelina